Ama-bacterium, amagciwane nesikhunta kungaba waphakamisela ukuhlasela umzimba wethu. Ukuze ulwe nabo isicelo elwa namagciwane, elwa namagciwane kanye ejenti antifungal. La mathuluzi bayakwazi ukuvimba ukusabalala izinto ezibangela izifo noma senze ngokuvumelana nayo ebulalayo. Kodwa ukuze alwe nabo baphumelele, udinga ukusungula kahle hle ukuthi yiziphi amagciwane okubangelwa yilesi sifo. Kwezinye izimo, kuba nzima ukuthola ukuthi uphethwe futhi indlela engcono kakhulu iwukuba elwa ezibanzi-bohlu.
Ikakhulukazi ekulweni Amagciwane
Kubalulekile ukucabangela ukuthi amanxusa amaningi elwa namagciwane nethonya elinamandla hhayi kuphela ejenti zakwamanye amazwe, kodwa futhi ku umzimba wesiguli. Ngakho, zingabantu nomthelela ongemuhle microflora we umnyango emathunjini namanye izitho. Ukuze abangele umonakalo okuncane, kubalulekile uqale ukwelashwa ngokushesha, ngoba amagciwane basakaza nge ngejubane elikhulu. Uma uphuthelwe okwamanje, ukulwa nabo kuyoba isikhathi eside futhi uyakhathaza ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, uma ukuphathwa kubalulekile ukusebenzisa ejenti elwa namagciwane, kufanele iphathwe inani lemali elinganisiwe izilokazane ezincane awunaso isikhathi ukujwayela. Chasiselwe Yiqiniso ungeke uphazamiseke, ngisho noma ngabe ngcono uyalandelwa.
Futhi kunconyiwe ekwelapheni antimicrobial ahlukahlukene, hhayi olulodwa lwento ephilayo. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi emva ukwelashwa odluliselwe ejenti angaphandle izinsalela eziye bazivumelanisa izidakamizwa ethile.
Ngaphezu kwalokhu ezidingekayo ukuthatha inkambo ezizoqinisa umzimba. Ngenxa imithi eminingi kungabangela ukusabela okukhulu umzimba uxabane nawo, kufanele kuthathwe kuphela iziyalezo udokotela wakho.
Singasho ukuthi antimicrobial ningabaleli ezintathu zama - a nitrofurans, imithi elwa namagciwane kanye sulfonamides. Izindlela zokugcina kunethonya nomphumela futhi ebhubhisa ngoba ayikuvumeli amagciwane ukuze uthole i-folic acid nezinye izingxenye ezibalulekile ukuze ukukhiqizwa kabusha nokuphila kwabo. Kodwa ekunqanyulweni kwanoma inkambo ukwelashwa noma esincane izidakamizwa kwenza kube nokwenzeka ukuba ukuzivumelanisa entsha izimo nezilwanyana ezincane. Esikhathini esizayo, sulfonamides ingasakwazi ukulwa.
Leli qembu kuhlanganisa imithi ugxile kahle, "Norsulfazol", "Streptocide", "Sulfadimezin", "Etazol". Futhi we nothi ukusivumela izidakamizwa kanzima "Sulgin", "Ftalazol" nabanye.
Uma kudingekile, imiphumela best udokotela wakho angase akukhuthaze ukuba sihlanganise kulezi zinhlobo ezimbili sulfa ejenti. Kungenzeka futhi inhlanganisela yemithi elwa namagciwane. Ezinye antimicrobial kuchazwe lapha ngezansi.
Ngokuvamile izidakamizwa engabelwe ekwelapheni angina, cystitis, pielita, Erysipelas. Kwezinye izimo, imithi kungadala imiphumela emibi ezifana ikhanda elibuhlungu, isicanucanu ezinzima ephelezelwa ukuhlanza, abanye ngenxa yezinkinga kwemizwa, hematopoietic futhi izinhlelo zenhliziyo. Kodwa imithi akemi namanje, futhi empeleni zisetshenziswa le mithi, kodwa ayinayo imiphumela eminingi engemihle. Le mishanguzo zihlanganisa "Etazol" futhi "Sulfadimezin".
Futhi "Streptocide" singasebenza ihlelwe ngokulandelana kwezihloko i ukusha, amanxeba iqhubeka, izilonda zesikhumba. Ungase futhi donsa ekhaleni powder uma kukhona coryza.
Lesi sidakamizwa liphumelele cerebral meningitis, inyumoniya, sepsis, isipatsholo nabanye. Kuyinto umenzeli elwa namagciwane ngokushesha ephuma emzimbeni, kodwa kufanele baphuze ngosuku amanzi amaningi.
antimicrobial Ezinhle nomphimbo, okwakha ezinqunyiwe laryngitis, stomatitis izilonda emathunjini, pharyngitis, yilezo aqukethe streptocid futhi norsulfazol. "Ingalipt" libhekisela lezo zimali. Phakathi kwezinye izinto, iqukethe Ukwakheka thymol, utshwala, Mint zikagamthilini uwoyela. He is isinqandakuvunda futhi ejenti eqeda ukuvuvukala.
It is kwabaningi ketshezi elwa namagciwane okuyinto nethonya elilimazayo amagciwane ahlukahlukene ezaziwayo. Sebenzisa izidakamizwa kungaba amanxeba ihlelwe ngokulandelana kwezihloko ekwelapheni ukugeza acinene futhi indlebe naphezu kweziziba, ngaphakathi ne uhudo virus. Ngesisekelo "furatsilina" bakhiqiza ezinye ejenti elwa namagciwane kanye elwa namagciwane.
Lokhu kancane izidakamizwa ugxile zingahlanganiswa ngemithi elwa namagciwane. Futhi, it is kuhlangene "etazol", "sulfadimezin" nezinye izidakamizwa. Yena iyasebenza, ezivimbela izifo emathunjini. Ngempumelelo nge uhudo, Gastroenteritis, nesifo.
Kwezokwelapha, kukhona izidakamizwa eziningi lezi zinkulumo zisuselwa "nitrofurans." Izindlela ezinjalo kufanele isenzo ebanzi. Ngokwesibonelo, "Furagin" futhi "furadonin" ngokuvamile ezinqunyiwe cystitis, urethritis, pyelonephritis, nezinye izifo ezithathelwanayo kohlelo genitourinary.
Umuthi i-antibiotic, okuyinto nethonya elilimazayo amagciwane abasha. In ekulweni umkhuhlane, ingxibongo nezinye izifo ezibangelwa amagciwane kuba ayizwakali. Kodwa i-pneumonia, peritonitis, abscesses, sepsis, meningitis "penicillin" kuyinto umsizi omuhle. Uveza ezihlukahlukene yizidakamizwa ophakeme kunaye esenzweni, ezifana "penicillin". Le mishanguzo ube ubuthi aphansi, cishe musa abangele ukuxakeka. Yingakho-ke kubhekwa ukuthi zingabantu antimicrobial eqinile izingane.
Noma kunjalo, kuhle ukucabangela ukuthi ikhwalithi embi izidakamizwa kungabangela ukusabela okukhulu nomzimba. Ingase futhi ukucindezela yemvelo microflora emathunjini kwasebekhulile kanye nezinsana. Immunocompromised abantu noma izingane ngesikhathi esifanayo "penicillin" bands ebekiwe amavithamini C no B.
Haka amelana "penicillin" abacindezelwe "chloramphenicol". It has namthelela elula, acid-fast bacterium, anaerobes, Pseudomonas aeruginosa. Ngo-psoriasis, izifo zesikhumba, kanye izidakamizwa is contraindicated. Futhi, asivunyelwe ukuthatha yokucindezela hematopoiesis.
Lokhu-antibiotic has nemikhiqizo eminingana, ezisiza etimeni letehlukene. Ngokwesibonelo, omunye engalapha inyumoniya, peritonitis nabanye ngempumelelo, abanye bakwazi ukubhekana nezinkinga ukutheleleka kohlelo genitourinary. Qaphela ukuthi ukusebenzisa "streptomycin" namanye amagama ahlobene nalo uvunyelwe kuphela ngemva kudokotela, njengoba ukweqisa izidakamizwa is hhayi ngaphandle isimo esibucayi kuyinto ukulahlekelwa ukuzwa.
Lokhu-antibiotic uyakwazi ukubhekana nama-bacterium amaningi amelana ukwelashwa nge neminye imithi. Kungase kube imiphumela emibi. "Tetracycline" kungenziwa kuhlangene "penicillin" endabeni sepsis ezinzima. Futhi kukhona amafutha okhuluma izifo zesikhumba.
Lokhu antibiotic okubhekwa 'zokubuyela emuva "lapho koSanta kwenzeka ukuthi namanye amanxusa elwa namagciwane zehlulekile umsebenzi wabo. Yena ngempumelelo kuyalinqoba isifo, eyabonakala ngenxa isenzo staphylococci namagciwane amelana. Kukhona wamafutha eritromitsinovaya ukuthi kusiza bedsores, ukusha, ubovu noma izilonda itheleleke, izilonda trophic.
Basic elwa ezibanzi-spectrum tibalwe lapha ngentasi:
Zabesifazane kanye nokwelashwa elwa namagciwane
Uma kunoma iyiphi enye indawo isifo uvunyelwe ukuhlasela izidakamizwa elwa namagciwane of okubanzi-spectrum, e zabesifazane kudingeka ukuze ashaye izindlela abazikhethe kahle ohlangothini kakhulu. Kuye microflora aqokwa izidakamizwa nje kuphela kodwa futhi umthamo wabo, kanye nesikhathi course.
Ngokuvamile, izidakamizwa elwa namagciwane e zabesifazane ihlelwe ngokulandelana kwezihloko isicelo. Kungaba suppositories yokugcoba, amaphilisi. Kwezinye izimo, uma kunesidingo, ukuphathwa is kwahambisana by anhlobonhlobo izidakamizwa ukuchayeka. Lokhu kungafaka "Terzhinan", "Polizhinaks" nabanye. imiphumela esheshayo bungatholakala uma uthatha imithi emibili noma emithathu ngesikhathi esisodwa. Kunoma ikuphi, ukubonisana lokubalulekile enemininingwane udokotela.
Drops "Parlazin": yokusetshenziswa, ubufakazi obuphathekayo kanye analogue
"Febrofid" (gel): yokusetshenziswa, incazelo, analogs, ukubuyekezwa
Kuyini inoveli kwenzeka kanjani?
Ukuhleka kahle kokuqeda indlu (isithombe)